देउवालाई ‘मनको बाघ’ ले खाएपछि ….. — Imandarmedia.com
देउवालाई ‘मनको बाघ’ ले खाएपछि …..
काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनको निजी स्वार्थका कारण सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। संविधान र कानुन अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदैछ।
भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
संविधानले कुनै पनि तहमा सरकारविहीनताको परिकल्पना गरेकै छैन। त्यही भएरै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखिएको हो।
अहिले देशका ठूला कम्युनिष्ट विभाजन भएको बेला कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा सहज हुने देखिएपनि देउवा अझै शशंकित छन्। गठबन्धन नगरे कम्युनिष्ट पार्टी एक भएर २०७४ सालको निर्वाचन जस्तो हुने हो कि?
भन्ने देउवालाई त्रास भएको कांग्रेस बृत्तमा चर्चा भइरहेको विषय हो। त्यसैलेपनि देउवा गठबन्धनको सम्भावित जित हारलाई केन्द्रमा राखेर खेलिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले गत ११ गतेपनि यथाशीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
गत ११ गते आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको थियो।
तर सरकार लचिलो हुनुपर्नेमा आयोगसंग झनै रुष्ट बनेको बनेको छ। सरकार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्दै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने तयारीमा जुटेको बेला आयोगको उक्त दवावले सरकार र आयोगबीच खटपट देखिएको छ।
आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेपनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआउँदा थप अन्यौल भएको बताए। ‘न निर्वाचन यथाशिघ्र गर्ने विषयमा हामीलाई जानकारी आएको छ।
नत सार्ने विषयमा नै निर्णय भएको छ। त्यसैले अन्यौलता बढेको छ। ति पदाधिकारीले भने। संविधानविद के भन्छन् ? संविधानविद् टिकाराम भट्टराई पनि आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने आग्रह गर्नु संवैधानिक प्रक्रिया भएको बताउँछन्।
र बैसाखमा निर्वाचन गर्नुनै संविधानको मर्म र भावना अनुसार भएको उनको तर्क रहेको छ। बहिर चर्चा चलेजस्तो कुनै कानूनी जटिलता नभएको भट्टराईले बताएका छन्। संविधानले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कुनैपनि परिकल्पना गरेको छैन।